Arin shaki gelisay caalamka oo Boqortooyada Sacuudiga lagu Eedeeyay… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Paris ( Mareeg news ) Boqortooyada sacuudi carabiya ayaa lagu eedeeyay arin shaki badan gelisay dowladaha caalamka, Dowlada faransiiska ayaa banaanka soo dhigtay in sacuudiga ay xereen Rwasaaraha wadanka lubanaa Sacad al xariiri.
Wasaarada arimaha dibada boqortooyada sacuudiga ayaa si kulul uga jawaabtay hadalka kasoo yeeray Madaxweynaha Faransiika emmanuel macron.
Dowlada faransiika ayaa ku soo baxday Xaalada Al-xariiri oo lagu xayiray dalka sacuudiga tasoo dhalin laheeyd Dagaal sukeeyo oo ka dhaca dalka lubnaan horaantii sanadkan.
madaxweeyne emmanuel macron oo la hadlay Talafashinka BFM TV ayaa Dowlada sacuudga ku sheegay ineey faragelin qaawan ku sameeysay Dalka Lubaan waxuuna yiri mr emmanuel macron ” Hadii aan ku soo bixi laheey xaalada lubnaan wadaka waxeey u horseedi laheeyd boqortooyada sacuudiga Dagaal sukeeye inuu galo dalka lubnaa.